Aqalka Sare Oo Loo Gudbiyey Codsi Uu Maamul Goboleed Ku Dalbanaya Joogitaanka Ciidamada Amisom
(Hadhwanaagnews) Monday, February 11, 2019 16:53:00
Muqdisho(HWN):-Maamul goboleed ka tirsan dawlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa dalbanaya inaan dhulkooda laga saarin ciidamo ka tirsan midawga Afrika oo qorshaynaya inay ka baxaan.
Wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle ayaa cabasho maamulkaasi ka qabo ciidamada Amisom ee ka baxaya deegaano ka tirsan u gudbiyey aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya.
Wasirkan oo kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doorto maamulka Hirshabeelle ee ka tirsan aqalka sare ayaa u sheegay in ciidamada ka socda wadanka Burundi ee ku sugan deegaano ka tirsan maamulkaasi ay qorshaynayaan inay ka baxaan, isaga oo sheegay in talaabadaasi ay sababi karto amni daro soo foodsaarta
deegaanada ay ciidamadaasi ka baxaan.
Wasiirka ayaa waxa uu yidhi “Ciidamada Amisom ee ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa qorshaynaya inay ka baxaan deegaanada Raage Geelle, Xaai Cali iyo Cadaale, haddii ay ka baxaana waxa iman karta amni daro.”
Wasiirka ayaa sidoo kael xildhibaanada u sheegay sababta keeni karaysa amni darada “Ciidamada soomaaliya uma diyaarsana inay ilaaliyaan amaanka deegaanada la qorshaynayo inay ka baxaan ciidamada ka socda wadanka Burundi ee ka tirsan hawl galka nabad ilaalinta ee Amisom, sidaas darteed ayey amni daro u dhici kartaa.”
Wasiirka ayaa ugu baaqay xildhibaanada laga soo doorto maamulka Hirshabeelle ee ka tirsan aqalka sare inay ka hawl galaan sidii aan deegaanadaasi looga saari lahayn ciidamada Amisom ee ku sugan isla markaana aanay dhayalsan.
Sidoo kale waxa uu xildhibaanada u soo jeediyey in hay’addaha ay khusayso arintani ee heer federaal ay xildhibaanadu culays ku saaraan inaan la fulin talaabada ciidamada lagu saarayo.